Fitaovana fametaha Cam Cam Locking Manufacturers sy Suppliers - Factory China - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Fiarovan-tena sy fanakam-basy > Fitiavana ho an'ny trano fambolena > Fandefasana Cam Cam Lock Lockers
Raha mila connecteurs na rindrankajy ho an'ny tetikasa vaovao ianao, dia jereo tsara lavitra noho ny Hardware WENAP. Isan-karazany ny connecteurs sy ny fifandraisana amin'ny cam amin'ny fampiharana maro. Ny WENAP Series dia lavorary ho an'ny RTA (vonona ny hanangona), fampisehoana sy rafitra fisaka. Raha mitady kitay hazo ianao, kitay, kofehy mifamatotra, ravin-kofehy fanakambanam-bokatra na glasy fantsom-piraketana, dia najanona izahay.
Product Parameter amin'ny fametahana Cam Lock Lock
M2-M16, ny lavany amin'ny 350mm, dia afaka mamokatra araka ny fomban'ny mpanjifa ihany koa
ISO, GB, DIN, JIS, ANSI, BSW, IFI tsy marim-pototra
Kitapo mangatsiaka / Sekoly faharoa / Fametahana / fametahana / Fitrandrahana / (automatique) fitsapana / (automatique) Packing / Shipping
Karbon vy, vy, tsy misy vy, varahina varahina, Aluminium, Zinc Alloy, Bronze
Zn-plated, Ni-plated, Passivated, H.D.G. (Hot dip galvanizing), Chromate, Chorm plated, Blackoxide, Polish, Plain, Coppercoated, bronze plating, Dacromet, oxidation anodic etc.
Ny lohan'ny tetezana, ny lohalika, ny lohany, ny loha baolina, ny lohalika, ny loha fisaka, ny lohalika, ny oval loha, ny lohalika, ny lamosina, ny loha hexagon, ny hex, ny lohan'ny lohalika, ny T-head sy ny sisa
Slot, Phillips, Phillips tsy misy mpanohitra, Square, Square Quotrex, Pozi, TORX, Fito hex, Tri-wing, Spanner, fitaovana fanesorana iray, sy ny sisa.
Famoronana indostrian'ny indostria, fanaka
Hazo na metimety
Product Feature sy ny fampiharana ny tranom-barotra Lock Lock Furniture
1. Grade:SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80,4.8 6.8 8.8 10.9 12.9
2. Size:M2-M16, ny lavany amin'ny 350mm, dia afaka mamokatra araka ny fomban'ny mpanjifa ihany koa
3. Standard:ISO, GB, DIN, JIS, ANSI, BSW, IFI tsy marim-pototra
fampiharana:Famoronana indostrian'ny indostria, fanaka
Product Details momba ny tranom-barotra Lock Camera Lock
Packaging Details:Kitapo: 32 * 24 * 14cm / 24 * 21 * 14cm Pallet: 110 * 110 * 12cm (azonay atao araka ny fangatahanareo)
Hot Tags: Furniture Cam Lock Fasterers, China, Manufacturer, Supplier, Factory, Made In China, Wholesale, Buy, Customized, An Stock, Bulk, Price, Price list, Quotation, High Quality